သမ်မာကမျြးတနေ့ (Scrabble Cheat) | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ » သမ်မာကမျြးတနေ့ (Scrabble Cheat)
သမ်မာကမျြးတနေ့ (Scrabble Cheat) APK ကို
သမ်မာကမျြးတနေ့ခြင်း, go-မှစကားလုံးဂိမ်းအထောက်အ6နှစ်အတွင်းအဘို့! ကျနော်တို့ Scrabble နှင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူစကားကဲ့သို့အ crossword ဂိမ်းများအတွက်အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသော cheat အဖြစ်ဂုဏ်သတင်းကိုတညျဆောကျပါဘူး။ သငျသညျငါတို့သည်လည်းထိုကဲ့သို့သောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကွတ်ကီး, ဒါမှမဟုတ်ပင်သင့်ရဲ့သတင်းစာ Jumble ပဟေဠိကဲ့သို့သောအခြားလူကြိုက်များဂိမ်းတွေနဲ့အလုပ်မလုပ်သိကျွမ်းခဲ့သလား ယနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတနေ့ထွက် Check နှင့်သင့်စကားလုံးဂိမ်းမကျေနပ်မှုကိုပျောက်ကင်းစေထိပ်ဆုံးအင်္ဂါရပ်!:
- Lightning အစာရှောင်ခြင်း,
- ရိုးသား! ကျနော်တို့ * သင်ရလဒ်များအားလုံး * ပေးပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့အထဲကအကောင်းဆုံးအမှတ်ပေးစကားလုံးများကိုဖုံးကွယ်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။
- ဘုတ်အဖွဲ့ solver Mode ကိုကစားအတွက်တစ်နည်းတွက်ချက်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ရမှတ်ကောင်းလာတာပါ!
- Screenshot သွင်းယူတိုက်ရိုက်ဘုတ်အဖွဲ့ solver သို့သင့်ရဲ့ဂိမ်းဖတ်! သုံးစွဲဖို့မယုံနိုင်လောက်အောင်လွယ်ကူသောရုံဖမ်းယူခြင်းနှင့် go! ထောက်ခံပါတယ်: (Fast Play စ mode ကိုအပါအဝင်) သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူစကား, Scrabble နှင့် Wordfeud!
- ကျနော်တို့ကိုလည်းအောက်ပါဂိမ်းများကိုထောက်ပံ့ပေးပေမယ့်စခရင်ပုံတင်သွင်းခြင်းမရှိဘဲ: Aworded (Angry စကား), ဂန္ထဝင်စကားတစ်ကိုယ်တော်, Wordsmith နှင့် Post ကိုတို့ကစကား။
- ပိုတောင်ကောင်းသွားပြီ! အဆိုပါဂန္ solver mode ကိုဘာမှနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်သည်! နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကွတ်ကီးများ, Crosswords, သမ်မာကမျြး Jumbles, Hangman နှင့်ထို့ထက် ပို. အတူကကြိုးစားပါ။
- ကျွန်ုပ်တို့၏မူရင်းနှင့်နေဆဲမြေပြင်ကိုချိုးဖောက်သောဝိညာဉ်တော် Mode ကိုသငျသညျအောက်မှာဂိမ်းမှာ peek ခွင့်ပြု!
- ပြည်တွင်းအဘိဓါန်! သင်တို့သည်ငါတို့၏ cheat သုံးစွဲဖို့အွန်လိုင်းဖြစ်ရန်ရှိသည်ဘူး။ သင်အကြိုက်ဆုံးအဘိဓါနျ Download နှင့်လမ်းမပေါ်တွင်သူတို့ကိုယူပါ! ဒါ့အပြင်အခြားအရာအားလုံးကဲ့သို့အဘိဓါနျအခမဲ့များမှာ!
- အလေးအိတ်၌ကျန်ကြွင်းရဲ့အဘယ်အရာကိုခြေရာခံ, ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့် "လက်ကျန်ကွက်များ" screen ကိုသင်လာမယ့်ရလိမ့်မယ်အဘယျသို့အက္ခရာများကြိုတင်ခန့်မှန်းကူညီပေးသည်!
- သံခိတ်နှင့်အလွတ်အုပ်ကြွပ်ထောက်ပံ့! တောင်မှပိုကောင်း, သင်အလွယ်တကူရှာစကားလုံးအနိုင်အထက်အဘယ်အရာကိုတည်နေရာနဲ့ပုံစံများကိုပြောပြနိုင်ပါတယ်။
- စကားလုံးအရှည်များအတွက် filter များအပါအဝင် Highly စိတ်ကြိုက်!
- ရရှိနိုင်သောအင်္ဂလိပ်, Nederlands, Français, Deutsch, Italiano, Españolနှင့်Portuguêsအပါအဝင်ခုနစ်ဘာသာစကားများ, ပါ!
ဘေးဖယ်စကားလုံးများကိုတည်ဆောက်ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်ကနေ, သမ်မာကမျြးတနေ့လည်းသင်ယူမှုနှင့် optimization tool တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘုတ်အဖွဲ့ solver သုံးပြီး strategize ဖို့သင်ယူပါ, တစ်ခုတည်း play မှာမျိုးစုံ crosswords ရအမြဲတမ်းအုပ်ကြွပ်ကစားခံရဖို့ရှိသေးသောအရာကိုတစ်ဦးအယူအဆရှိသည်ဖို့မည်ကဲ့သို့ရှာဖွေတွေ့ရှိ။ သင်တို့သည်လည်းနေ့စဉ်ပြဿနာများ, ပဟေဠိများနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြေရှင်းဖို့ကသုံးနိုင်သည်။ သမ်မာကမျြးတနေ့တောင်မှအင်္ဂလိပ်သင်ပေးဖို့စာသင်ခန်းများတွင်အသုံးပြုထားပြီး - ငါတို့သည်ထင်တစ်ခုခုပဲအံ့သြဖွယ်ပါ!
သမ်မာကမျြးတနေ့အခမဲ့နှိမ့်ချကြော်ငြာ-supported ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်, FULL နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတနေ့ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုထောကျပံ့ပေးကာကြော်ငြာအခမဲ့အတွေ့အကြုံကိုခံစားပါ။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ကိုမှန်မှန်မကယ်မလွှတ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတနေ့ FULL အမြတ်အစောပိုင်းအပေါငျးတို့သအေးမြသော features အသစ်မှဝင်ရောက်ခွင့်, တိုးတက်မှု, နှင့်ဘာသာစကား updates များကိုအသုံးပြုသူများ။
- စာနယ်ဇင်းနှင့်တဦးတည်းအပြည့်အဝစက္ကန့်အတွက် "Volume Down" နှင့် "ပါဝါ" ကိုင်ထားပါ။
- အချို့သောဖုန်းများတွင်, ဒီပေါင်းစပ် "မူလစာမျက်နှာ" နှင့် "ဟုပါဝါ။ "
★ Screenshot တင်သွင်းခြင်းနှင့်အတူအခက်အခဲရှိနေပါသလား?
1) လုံးဝပုံမယူမီအထဲကချဲ့။ ဤနည်းသည်မြေတပြင်လုံးဘုတ်အဖွဲ့မြင်နိုင်သည်နဲ့ Word တနေ့စနစ်တကျတိုင်း tile ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပေးနိုင်သည်။
2) သင့်အားဖွင့ ်. အုပ်ကြွပ်အပေါငျးတို့သ tile ကိုထိန်သိမ်းအပေါ်မဟုတ်, ဂိမ်းဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်များမှာသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ဒါဟာသင်ရရလဒ်ကိုတရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းသေချာ။
3) ဘာမျှဂိမ်းမိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။ Facebook မှာ Chat ကိုခေါင်းဆောင်များ, app tray နှင့်အကြောင်းကြားစာတဲ့ pop-ups အားလုံးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတနေ့ရောက်စွက်ဖက်နိုင်ပါ။
★သင်အကြိုက်ဆုံးစကားလုံးဂိမ်းကလက်ခံမအကြံပြုထားသောစကားလုံးလား? သငျသညျကိုအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပြုချက်များဆန့်ကျင်အသုံးပြုနေသည်အဘိဓါန်အဘယျသို့ Check:
WWF က: ဖွင့်ရန်
Post ကိုအားဖြင့်စကားများ: TWL
★ဝိညာဉ် Mode ကိုအတူအခက်အခဲရှိနေပါသလား? ဒီကြိုးစားပါ:
ယင်း utility ကို app ကို "အော်တိုမှတ်ဉာဏ် Manager က" Install, အောက်ပါအပြောင်းအလဲများကိုလုပ်:
1) က "အပျော့စား" setting များကို Selected ။
2) 10MB မှ setting ကို "က Hidden လျှောက်လွှာ" ကိုတိုးပှား။
မှတ်ချက်: Firecracker ဆော့ဝဲ LLC သည်အော်တိုမှတ်ဉာဏ် Manager က app ကိုအတူဆက်စပ်ခြင်းမရှိပါ။
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲစရာမလိုဘဲတရားစကားတော်တနေ့ရဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ solver & OCR နည်းပညာကိုကြိုးစားရန်လိုပါသလား? ကြိုးစားပါ: ပထမဦးဆုံးသူငယ်ချင်းများ Cheat .IO နှင့်အတူစကား!
ဒီ app ကို Zynga, Inc သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူနာမည်ကျော်ဂိမ်းစကားများချမှတ်သူများနှင့်ဆက်စပ်ခြင်းမရှိလမ်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
WWF က Facebook Messenger အဘို့အ OCR Update ကို
သမ်မာကမျြးတနေ့ (Scrabble Cheat)
Firecracker ဆော့ဝဲ LLC